घाँटी हेरी हाड निल्नु त ठिकै हो, पानी मात्रै छिर्ने घाँटी भएकाले के गर्ने महाशय
सन्दर्भः तिहारलगायतका चाडपर्वको विकृति
२९५८ पटक पढिएको
मजदुरी गरेर दैनिक गुजारा चलाउनेहरूको तिहार सकिइसकेको छ । तर, हुनेखानेहरूको मैझारो पाटी र रहलपहल जुवातास चलि नै रहेको छ । उपभोक्तावादी संस्कृतिको प्रभावले बढी खर्च गर्नेले सोही अनुपातमा समाजमा मानसम्मान प्राप्त गर्ने स्थिति छ ।
केही वर्ष पहिले दशैंतिहारको अवसर पारेर आयोजना गरिएको शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रममा एक जना हुनेखाने र सामाजिक प्रतिष्ठा भएको वक्ताले शुभकामना दिने सन्दर्भमा घाँटी हेरेर हाड निल्नुपर्छ भने । क्षमताभन्दा अतिरिक्त खर्च गर्नु हुँदैन भन्ने उपदेश दिएका थिए । सो भाषणले पङ्क्तिकारको मनमा नराम्ररी छोयो र आफ्नो पालोमा भन्न कर लाग्यो उसो भए महाशय एक धार्नी मासु खान पनि ऋण खोज्नुपर्नेले दशैं मान्ने कि नमान्ने ? तिहारमा चेलीबेटीलाई केही रुपैयाँ दक्षिणा गर्न पनि हम्मे पर्नेले तिहार मान्ने कि नमान्ने ? अवाक् भए ती वक्ता ।
वास्तवमा घाँटी हेरी हाड निल्नु त ठिकै हो पानी मात्रै छिर्ने घाँटी भएकाले के गर्ने ? शायद यस्तै प्रश्नको उत्तर दिनलाई कल्याणकारी राज्य व्यवस्थाको अवधारणा शुरु भएको होला, समाजवादको अभियान शुरु भएको होला ।
नेपाली समाज र समुदायले मनाउने विभिन्न चाडपर्वहरू हाम्रो संसार र भूमण्डलीकरणबाट आफ्नो फरक विशेषता देखाउन पुर्खाहरूले शुरु गरिदिएको सशक्त अभौतिक अनमोल सम्पत्ति हो । भरखरै तिहार सम्पन्न भएको छ । तिहारको चर्चा गर्दा यसको शास्त्रीय र सांस्कृतिक महत्व हेर्नुपर्छ ।
१. शरदमासको याम, यथासम्भव आफ्नो थातथलोमा भेला हुने अनि पुराना कुरा सम्झिएर हार्दिकता प्रकट गर्ने पर्व हो । साँचो अर्थमा सम्बन्धहरू नवीकरण गर्ने र मानव हुनुका अर्थहरू खोज्ने ‘मेकानाइज’ हुँदै गएको एउटा सशक्त मानवीय पहल हो ।
२. कति राम्रो संद्भाव, देउसे टोलीमा दाइ, काका जो भए पनि भट्याउनेले ‘ए मेरा भाइ हो’ भन्न पाइने । सबै घरमा सहजै जान पाइने । चिनजानै नभएको मान्छेलाई पनि उचित मानमनितो दिनुपर्ने कति राम्रो संस्कृति । सिराहाको कुनै गाउँका बासिन्दा सुनसरीको अर्काे कुनै बस्तीमा मानसम्मानका साथ देउसीभैलो खेलिरहेका हुन्छन् ।
३. रगत सम्बन्धकै कारणले मात्र होइन सामाजिक सम्बन्धको कारणले माइती र चेलीको सम्बन्धमा आपसमा प्रकट हुने सद्भाव, सम्मान र प्रेमको कुनै शब्दले व्यक्त गर्न सकिँदैन ।
४. टोलटोलमा गरिने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमहरूको सप्तरङ्गी सांस्कृतिक रौनकको वर्णन उत्तिकै रसिलो हुन्छ ।
५. गाउँघरमा, छरछिमेकमा र आफन्तमा भएको झैझगडा पनि चाडबाडकै बेलामा फुकाउने प्रचलन पनि छ ।
६. गरिबीको रेखामुनि रहेका लाखौं नेपाली जसको प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष आम्दानी २० हजार रुपैयाँभन्दा पनि कम छ । उनीहरूले समेत खोजमेल गरेर मिठो मसिनो जुटाउने र टालटुल पारेर नयाँ कपडा लगाउँदा तिनका र तिनका लालबालाको ओठमा प्रस्फुटित हुने स्निग्ध खुशी समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणले हाम्रो चाडबाडको अकाट्य सुन्दर पक्ष हो । अर्थशास्त्रीय कसीमा आलोच्य भए पनि यस्ता चाडपर्वको कारणले शायद लेखक कर्ण शाक्यको भनाइजस्तै कुल गार्हस्थ उत्पादनमा योगदान नगरे पनि कुल गार्हस्थ सन्तुष्टि वृद्धिमा योगदान गर्ला ।
चाडपर्वका कुरूपता (कुरूप पक्षहरू)
उपभोक्तावादी समाज र सीमाहीन बजारीकरणको कारणले हँुदा खाने वर्गका मान्छेहरूलाई चाडपर्व नआए हुन्थ्यो जस्तो लाग्न थालेको छ । सामान्य तरिकाले चाडपर्व मान्न पनि कठिन हुँदै गएको अवस्था छ । धनदौलत हुनेको चाड र नहुनेको चाडमा आकाश जमिनको फरक हँुदै गइरहेको छ । समाज यति धेरै भद्रगोल भूमण्डलीकरणको गोलचक्करमा फसिरहेको छ कि अबको १० वर्षपछि के होला ? केही वर्ष अगाडि दीपावली गर्दा मैनबत्तीहरू बाल्दा गाउँघर उज्यालो हुन्थ्यो तर अब गाउँगाउँमा बिजुलीको झिलिमिली हजारौँ रकम खर्च गरेर बाल्ने फेसन आएको छ ।
भाइटीका नै नमान्ने देशको केमिकलाइज गरिएको सयपत्री माला बजारबाट किन्नुपर्ने बाध्यता छ । फलफूल पनि पारीबाटै ल्याउनुपर्ने अनि पटाका नपड्काई नहुने फेसन चलेको छ । देउसे भैले पनि पैसाकै लागि सक्रिय हुने चलनको बढोत्तरी हुँदैछ । धेरै पैसा दिनेको घर छानेर भाका हालेर देउसी खेल्ने अनि धेरै दक्षिणा दिन नसक्नेको घरमा पस्दै नपसी हिँड्ने हाम्रो परम्परामा असुहाउँदो क्रम पनि शुरु हुन थालेको छ । घाँटी हेरेर हाड निल्ने हो भने गरिबीको रेखामुनि रहेको २३ प्रतिशत नेपालीको घरमा चाडपर्व आउँदैन वा आए पनि चाडपर्व सकिँदा पुस्तौनी बोझ (ऋण) थपेर जान्छ ।
अहिले संझन्छु म ९–१० वर्षको हुँदा प्रजातन्त्रको लहरले व्यापक रूपमा राजनीतिक धु्रवीकरण भइरहेको रै’छ । मेरो छिमेकी दाइले अब कम्युनिष्टले जित्यो भने सबै बराबर हुन्छ भने । धनी र गरिब बराबरी हुने कुरा सुनाउँदा म छक्क परेँ र रातभर निद्रा लागेन । तर, मैले मेरो गाउँघरका सबै आफन्त साथीभाइ सम्झिएँ अनि हर्षले पुलकित भएँ । अहा ! हामी उस्तै कपडामा, उस्तै घरमा । उस्तै खाना खाई रमाउन पाउने भइयो भनी हर्षले पुलकित हुँदै एक टाँगो घाम आइन्जल सुतेँछु । शायद त्यो मेरो बाल्य सोचाइ अनि सेन्ट साइमनको जस्तै काल्पनिक समाजवादी भ्रम थियो होला ।
आज नेकपाको सशक्त बहुमत भएको सरकार छ । सानो घाँटी भएकाहरूको लागि यो भन्दा अर्काे अवसर के हुन सक्छ ? गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताको कल्याणको लागि यथेष्ट कदम चाल्दै अगाडि बढे समाजवादको यात्रा तया होला कि ? अन्यथा निरक्षर साइँला दाइको नाम कलमवीर राख्दैमा लेखपढ गर्न जान्ने जानिफकार हुने होइनन् । सेन्ट साइमनको काल्पनिक समाजवादको प्रतिस्थापनमा वैज्ञानिक समाजवादको व्याख्या सुनाए पनि सिद्धान्तको व्यवहारबाटै परीक्षा हुने हो ।
१. गरिबीमा रहेकाहरूको आवश्यक संरक्षण र सहुलियतः
हुन त आज पर्यन्त चिनीको उपभोक्ता मूल्य निर्धारण गर्दा पनि सहज ढङ्गले लागू हुन सकेको अवस्था देखिएन । विशेष संरक्षण गरेर दिनुपर्ने वर्गलाई छुट दिएर राहत प्रदान गर्ने कुरा सजिलो छैन । अरु देशमा पुरानो विषय बनिसकेको रासन कार्डको बारेमा छलफल पनि हुन सकेको छैन । जब अप्ठ्यारो हुन्छ तब क्रान्ति हुन्छ । राजनीतिक अभियान त्याग र बलिदनानको माध्यमबाट अगाडि बढ्छ तसर्थ क्रान्ति नगरी सुख छैन ।
२. उत्पादन र उपभोगमा राष्ट्रवादी सोचः
तिहारमा नेपाली माटोमा फुलेका अर्गानिक सुगन्धित त्यति राम्रा फूलहरू सीमापारीबाट ल्याइएका कृत्रिम झँै लाग्ने फूलहरूका अगाडि निरीह हुन्छन् । नेपाली माटोमा फलेका अलैँची लगायतका अनेक मसलाहरूको सट्टा पारीबाट आउने सुकुमेलहरू नै मसलाको रोजाइमा पर्छ । नेपाली माटोमा फलेका बदामको तुलनामा महङ्गो पैसा तिरेर आउने काजु नै रोजाइमा पर्छ । उत्पादन र उपभोगमा राष्ट्रवादको नयाँ संस्करणको अब खोजी हुनै पर्छ । उत्पादन र उपभोगमा ‘मेरो माटोको उत्पादन’ पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भन्ने सन्देश ब्राण्डिङ पेकेजिङ, भण्डारण र वितरणको माध्यमवाट राज्यले दिनै पर्छ ।
३. अनावश्यक दान चन्दामा प्रभावकारी नियन्त्रणः
हुन त देउसी भैलोमा ५१ रुपैयाँभन्दा बढी दक्षिण दिन पाइँदैन भनेर नियम बनाइन्छ । तर हजारौंको दान दातव्य चलिरहँदा राज्यको अङ्ग मौन बसिरहेको हुन्छ । यदि यसलाई मात्रै पनि नियन्त्रण गर्न सकियो भने संस्कृतिको पनि संरक्षण हुन्छ र विषमताको अनुभूति पनि अलि नियन्त्रण हुन सक्छ ।
सामाजिक–सांस्कृतिक सङ्घ संस्थाको भूमिका
तिहारकै सन्दर्भको चर्चा गरौँ । कति राम्रो देउसी भैलोको प्रचलन छ तर यसलाई पैसा उठाउने माध्यम बनाउनुभन्दा पनि भावी पुस्ताले समेत खेल्न र हेर्न पाउने संस्कृतिको रूपमा वचाउनुपर्ने चुनौति छ । देउसीभैलोमा राम्रै उद्देश्य राखेको किन नहोस् तर यसलाई पैसा सङ्कलन गर्ने माध्यमको रूपमा प्रयोग गरिन थालिएको छ । यसले यसको महिमा सङकुचित हुन पुग्छ । चन्दा त अरु बेला अरु माध्यमबाट पनि उठाउन सकिएला तर चन्दाको तनावमा यति राम्रो सांस्कृतिक पुर्खाको नासोलाई चन्दाको बन्दी बनाउनु हँुदैन । यसमा सामाजिक सङ्घ संस्थाले अगुवाइ गर्नुपर्छ । गरीबको दलानमा देउसी भैलो पुग्न छोड्दै गएको छ । सामाजिक, सांस्कृतिक सङ्घ संस्थाको अगुवाइमा सांस्कृतिक अङ्ग पु¥याएर नमूना सद्भावपूर्ण देउसीभैलो खेल्न सके कति राम्रो हुन्थ्यो होला । तर, सामाजिक सङ्घ संस्थाहरू पनि चन्दाको ‘भोल्युम’लाई नै प्रवद्र्धन गर्ने हिसाबले तिहारलाई लम्ब्याउँदै धनीको दलान खोज्दै हिँडेपछि तिहारको प्राण कसरी बच्छ ?
सेलिब्रेटी तथा जनप्रतिनिधि र समाजका अगुवाहरूको भूमिका
समाजका अगुवाहरूले गरेको व्यवहार अरुको लागि ‘डेमोस्ट्रेसन इफेक्टर रेफेन्सियल इम्प्यक्ट’को रूपमा रहन्छ । तसर्थ समाजका अगुवाहरूले देखाउन सक्नुप¥यो राज्यले तोकेको ५१ रुपैयाँ मात्र देउसेलाई दान गरेर । त्यस्तै, आम मानिसजस्तै दिदीबहिनीलाई साधारण उपहार दिन सक्नुप¥यो ।
तर, लोकलाजको विषय बनाएर समाजका अगुवा आफैँ आम मानिसमा पर्ने प्रभावको बेवास्ता गर्दै अनि प्रतिष्ठाको विषय बनाउँदै बढी रकम दान दिन थाल्छन् । सकीनसकी उनीहरूकै सिको समाजका अरु सदस्यले पनि गर्छन् ।
जनप्रतिनिहरूको घरमा देउसीको टोली बाक्लो देखिन्छ । किनभने लोकलाज, अनि भोलि कार्यकर्ता रिसाउलान् भन्ने भ्रम र डरका कारणले अलि धेरै दक्षिणा दिने गर्छन् । जनप्रतिनिधिकोमा अलि बढी दक्षिणा लिन पाइन्छ भन्ने आत्मविश्वासमा मान्छेहरू देउसीभैलो खेल्न जाने गर्छन् । यस्तो बेला जनप्रतिनिधि वा सेलिब्रेटी दृढ भएर कानुनी सीमाभित्र अडिए भने समाजमा ठूलो सकारात्मक प्रभाव पर्छ । अनि थोरै दक्षिणा दिन सक्नेले पनि खुलेर औकातअनुसार दक्षिणा दिन्छन् ।
तिहारजस्तो प्रकृति, संस्कृति र परम्परासँग जोडिएको पर्व मनाउँदा पनि पैसाको आधारमा हाइरार्की बनाउने, पैसाको आधारमा रोल नम्बर तोकिने, सानोठूलो ठान्ने समाजको मनोविज्ञानमा धावा नबोली समाजवादी अभियानको संविधानको भावना कसरी कार्यान्वयन होला ?